Manchester United oo bartilmaameed ka dhigatay laacib khad dhexe oo ka ciyaara horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 03 Apriil 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay la soo saxiixato laacibka khadka dhexe ee naadiga Monaco, Youri Tielemans.
Man Utd waxa ay doonaysaa inay Youri Tielemans la soo wareegto suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan kaddib markii uu bandhig cajiib ah ku sameeyey u ciyaarista kooxda Leicester City.
Tielemans ayaa heshiis amaah ah ugu soo biiray kooxda Leicester suuqii kala iibsiga bishii Janaayo waxaana uu ku soo baxay mid cajiib ah u ciyaarista kooxda Foxes, isagoo gool dhaliyey afar kalena caawiyey 7 kulan oo uu ka soo muuqday horyaalka Premier League.
Kooxda macallin Brendan Rodgers ayaa la rumeysan yahay inay isku diyaarinayaan inay bixiyaan 40 milyan oo gini si ay u soo qaataan xiddigan xulka qaranka Belgium oo ay ugu soo qaataan heshiis joogto ah xagaagan, laakiin warsidaha HLN ayaa warinaya in Man United ay sidoo kale doonayso oo ay diiradda ku hayso laacibkan khadka dhexe.
Tielemans ayaa kooxda haatan milkiyaddiisa leh ee Monaco waxa uu kaga soo biiray Anderlecht xagaagii 2017-kii, waxaana uu dhaliyey lix gool 65 kulan oo uu tartammada oo dhan u ciyaaray kooxda iska leh.
Man United ayaa xalay guuldarro 2-1 kala kulantay kooxda Wolverhampton Wanderers horyaalka Premier League waxaana la filayaa inay lacag badan qarash-gareyn doonto suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, haddii ay doonayaan inay markale ku tartammaan hanashada horyaalka.